Izindlu e- Annette - I-Airbnb
Izindlu e- Annette
Ifulethi leholide ebhilidini elisendaweni enhle esifundeni saseGarmisch. Ifakwe ukunaka imininingwane, izungezwe imvelo emangalisayo. Isitobhi sebhasi esiya endaweni yokuqwala izintaba nokushushuluza kanye nezitolo ezisemnyango. Cishe imizuzu eyi-15 ngezinyawo ukuya enkabeni ye-Garmisch, cishe imizuzu eyi-10 ukuya endaweni yezintaba ku-Kramer. Intela yabavakashi engu-€ 3 umuntu ngamunye ngosuku ayifakiwe entengo futhi iqoqwa ngokheshi lapho ufika. Kukhona ikhadi lezivakashi le-GaPaCard elinezaphulelo eziningi.
Ifulethi elinefenisha yesimanjemanje elinombhede webhokisi elinethezekile (180 x 200cm), amaduvethi avulekile (155 x 220m) kanye nokukhethwa kwemicamelo. Indawo evulekile yokuhlala-yokudlela-ikhishi. Ikhishi elihlome ngokuphelele eline-microwave, umshini wokuwasha izitsha kanye ne-induction hob. Igumbi lokulala nendawo yokuhlala enokufinyelela kuvulandi obanzi obheke eningizimu enombono we-Alpspitze neZugspitze.
Isethi yengane / encane enombhede wokuhamba, umatilasi, okokulala, isihlalo esiphezulu, isihlalo sendlu yangasese, ibhodlela / isifudumezi somntwana, ithawula lezingane, umata wokushintsha nezitsha zezingane zinganikezwa ngama-euro ayi-10 ngokuhlala.
Izintaba, imvelo, isiko Bavarian, anhlobonhlobo ezokungcebeleka imisebenzi ehlobo nasebusika. Ukuphuza amanzi aphuma empompini amnandi. Izindawo zokudlela ezinhle ezinemenyu yamazwe ngamazwe. Amathuba okuthenga ahlukahlukene kanye nezamasiko.